YEYINTNGE(ကနဒေါ): Sunday, November 17
ဓါတ်ပုံ ချောချော..။ စန္ဒာမြတ်သူ။ ဟယ်လင်အေးကျော်
BY YeYint Nge ... 11/17/20130comment
OIC အဖွဲ့ စစ်တွေလေဆိပ်မှ ရန်ကုန်သို့ မထွက်ခွာမီအစည်းအဝေး
ရခိုင်ပြည်နယ်၊စစ်တွေမြို့သို့ OIC အဖွဲ့ရောက်လာပြီး ဒုက္ခသည်များကိုလေ့လာကြည့်ပြီး
နောက်ရန်ကုန်မြို့သို့ မပြန်မီနာရီပိုင်းအလိုတွင်ရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည် ရပ်မိရပ်ဖ(၁၅)ဦး ကိုခေါ်၍
အဆိုပါဆွေးနွေးပွဲတွင် OIC အထွေထွေအတွင်းရေးမှုး Mr.Ekmeleddin Ihsanoglu
(၁) ဦးစွာစလာမ် နှုတ်ခွန်းဆက်လျှက် ဘိစ်မိလ္လာဟ်ဖတ်ပြီး ကျွန်တော်တို့ OIC အဖွဲ့သည်
ကမ္ဘာ့ ပေါ်ရှိ မွတ်စလင်မ် သန်းပေါင်း(၁၅၀၀)ကျော်၏ ကိုယ်စားပြုအဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ဖြစ်ပြီး
ထိုသန်းပေါင်း(၁၅၀၀)ကျော်သော မွတ်စလင်မ်များသည် ခင်ဗျားတို့ရိုဟင်ဂျာ
(၂) ကျွန်တော်တို့ OIC အဖွဲ့သည် ခင်ဗျားတို့မြန်မာနိူင်ငံကိုပထမ မည်သည့်တစ်စုံ
တစ်ခုမှမလှူခဲ့ကြောင့် ယခုမှစ၍ စလှူသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း။
(၃) ခင်ဗျားတို့ အစိုးရကယခုကောက်ယူနေတဲ့ လူဦးရေစာရင်းကိုခင်ဗျားတို့ပါ ပါဝင်
(၄) ခင်ဗျားတို့အတွက်ပထမအရေးကြီးတဲ့ နိုင်ငံသားဖြစ်မြောက်ရေး OIC အဖွဲ့အနေ
နဲပြည်ထောင်စုအစိုးရနှင့် ကတိကဝတ်ပြုထားပြီဖြစ်ကြောင်း ။
(၅) နိုင်ငံတော်အစိုးရမှ ခင်ဗျားတို့ကိုနိူင်ငံသားအဖြစ်လက်ခံပြီးမှသာ OIC အဖွဲ့မှ လူမျိုးစု
(၆) ကျွန်တော်တို့အစ္စလာမ်ဘာသာသည် ကမ္ဘာပေါ်တွင်တန်ဖိုးအရှိဆုံး၊အလေးစား
ဆုံး၊ သြဇာအရှိဆုံး၊ အကျော်ကြဆုံးနှင့်အကြီးမားဆုံး ဘာသာကြီးတစ်ရပ်ဖြစ်ပြီး
လူ့အသက်ကို သတ်ပိုင်ခွင့်မရှိပြီးရက်ရောလှူဒါန်းရန် ပြဋ္ဌါန်းထားသောဘာသာ
ထိုနည်းတူစွာ အခြားဘာသာတိုင်းမှာလည်း လူ့အသက်ကိုမသတ်ရဟုပြောထား
ရှိပါသည်။ဒါ့အပြင် OIC ဟူသောအဖွဲ့သည် ကမ္ဘာ့မှာဒုတိယအကြီးဆုံးအဖွဲ့အစည်း
တက်ရောက်လာသောပုဂ္ဂိုလ်များမှ တင်ပြစရာရှိရင်တင်ပြပါဆိုသောအခါ ~~~~
ဦးစွာစလာမ်ပေးပြီးလေးစားအပ်ပါသော OIC အဖွဲ့ဝင်လူကြီးမင်းတို့နှင့်တွေ့ဆုံခွင့်
ရတာ အင်မတန် ဝမ်းသာဂုဏ်ယူမိပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့သည် ဒီမြန်မာနိူင်ငံ
ကျွှန်တော်တို့သည် နိူင်ငံတော်အစိုးရပြည်ထောင်စု လဝက ဝန်ကြီးဦးခင်ရီပြော
တို့သည်မရောနှောသော (ရိုဟင်ဂျာလူမျိုးစစ်စစ်)ဖြစ်ကြောင်း။ ၁၉၄၇မြန်မာနိူင်ငံ
သားဥပဒေအရ ကျွန်တော်တို့သည်မြန်မာနိူင်ငံသား ရိုဟင်ဂျာလူမျိုးများဖြစ်သည်
နှစ်ပေါင်း (၃၀)ကတည်းကပင် ရိုဟင်ဂျာသမိုင်းနှင့် ရှေးဟောင်းမှတ်တမ်းဝင်သာ
သနိကအဆောက်အအုံများကို ပျက်ဆီး၊ ပျောက်ကွယ်ထားပြီးအစ္စလာမ်ဘာသာဝင်
လေးစားအပ်တဲ့ OIC အဖွဲ့များခင်ဗျား ကျွန်တော်တို့အစ္စလာမ်ဘာသာဝင်လူနည်းစုကို
ရိုဟင်ဂျာလူမျိုးမြန်မာနိူင်ငံသားအဖြစ်လက်ခံပေးပါရန် OIC အဖွဲ့အနေနှင့်မြန်မာနိူင်ငံ
တော်အစိုးရနှင့်ပူးပေါင်းပြီး ကူညီပေးသွားပါရန်လေးစားစွာဖြင့် အကြံပြုတင်ပြအပ်
ဦးအောင်သိန်းမှ ယခုလိုတင်ပြချက်များကို OIC အထွေထွေ အတွင်းရေးမှုး
Mr.Ekmeleddin Ihsanoglu မှ အထူးသဘောကျကြောင်းပြောဆိုချီးကျုး၍
အစည်းအဝေးရုတ်သိမ်းလိုက်ပါသည်ဟု စစ်တွေမြို့မှ ရိုဟင်ဂျာအရေးလှုပ်ရှားသူ
ရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည် Mr. Hla မှ သတင်ပေးပို့ထားပါသည်။
၁၅။ Mv ဦးမူဟိယောဒ္ဒိန်စသည်တို့ဖြစ်ပါသည်။
မှတ်ချက် ။ ဤကဲ့သို့ အာဏာပိုင်များရှေ့မှောက်တွင် မကြောက်မရွံ့ပဲ ရဲရင့်စွာ ပြောဆို
ခဲ့သော ဦးအောင်သိန်းအတွက် (ဒူအာ) ဆုတောင်းပေးပါရန် မေတ္တာရပ်ခံ
ဓါတ်ပုံ - စစ်တွေမြို့လေဆိပ်အစည်းအဝေးခန်းမ
Miss Grand International Final ပြိုင်ပွဲနေ့ သို့ ရောက်ရန် (၂)ရက်သာလိုပါတော့တယ်....
ယခုလက်ရှိအချိန်အထိ ထားထက်ထက်က မဲအများဆုံးရရှိထားပါတယ်...
င်္Final နေ့ အဆုံးအဖြတ်ပေးချိန်အထိ မြန်မာက မဲအများဆုံးရရှိနေမယ်ဆိုရင်တော့ မြန်မာနိုင်ငံအတွက် ဂုဏ်ယူဖွယ်ရာ ဆုတစ်ဆု ပိုင်ဆိုင်ခွင့်ရတော့မှာဖြစ်သလို ထားထက်ထက်ရဲ့ပရဟိတအစီအစဉ်လေးလည်း အကောင်အထည်ဖော်နိုင်တော့မှာပါ...
မြန်မာပရိသတ်များ Click လေးတစ်ချက်နဲ့ Miss Grand Myanmar - ထားထက်ထက်ကို အားပေးကြဖို့ မျှော်လင့်ပါတယ်....
Facebook Account တစ်ခုကို တစ်ကြိမ်သာမဲပေးနိုင်ပါတယ်...
ရဲဘော်လှဟန် သမီး ခင်ဝင့်ဝါ ပရဟိတစိတ်အပြည့်နဲ့
အဖေက ၁၉၈၈ ဗ.က.သ ကော်မတီဝင် ကျွန်တော်တို.ရဲဘော်လှဟန်
သမီးက ပရဟိတစိတ်အပြည့်နဲ. အလှမယ် ခင်ဝင့်ဝါ ။
၁၆.၁၁.၂ဝ၁၃ ရက်နေ့ မွေန်းလွဲ (၁းဝဝ) နာရီအချိန်တွင် အမှတ် ၇၆၊ ချယ်ရီလမ်း၊ ၁၄ ရပ်ကွက်၊ တောင်ဥက္ကလာပမြို့နယ်နေ ကွယ်လွန်သူ ဦးစိန်လွင် အသက် (၄၇) နှစ်၏ သက်မဲ့ရုပ်ခန္ဓာအား ရေဝေးသုဿန် အအေးခန်းသို့ မြန်မာ့ဂုဏ်ဆောင် အလှမယ် ခင်ဝင့်ဝါမှ ထပ်မံ၍ ကူညီ ဖေးမခဲ့သည်။
နီရဲတဲ့ အလံ ..တလူလူလွင့်ပါလို့..
Written by Shwe Payit (17-11-2013)
နေပြည်တော်သို့ ချီတက်လာသော စစ်မှန်သည့်ဒီမိုကရေစီလိုလားသူ ပြည်သူထောင်ပေါင်းများစွာ
မန်းတလေးမြို့မှ ဖေ့ဘုတ်ဒီမိုစလစ်ဗရစ်တီတစ်ဦးဖြစ်တဲ့ ဒေါ်ဟယ်လင်အေးကျော် ခေါ် ဒေါ်မိမိရဲ့ ဒီမိုစစ်ကြောင်းချီ ရင်ခုန်သံစကား
ကျွန်မတို့အောင်မြေသာစံစစ်ကြောင်းကြီးသည် လေအိတ်ကားကြီး၂စီးအပြင် အခြားကားငယ်များနှင့်အတူ ဒီမိုကရေစီမောင်နှမအားလုံး တူညီသောစိတ်ဓာတ်များဖြင့် နေပြည်တော် ခြေ/ဥ ပြင်ဆင်ထောက်ခံရေး လူထုအစည်းအဝေးပွဲသို့ စတင်ချီတက်နေပါပြီ။
သွားလာရေး၊ အစားအသောက် စသည်တို့ကို လိုလေသေးမရှိအောင် ဖြည့်စွမ်းလှုဒါန်းပါသော ကျွန်မ တခါမျှပင်မမြင်ဘူးတဲ့ Facebook မိတ်ဆွေအား အောင်မြေသာစံမြို့နယ် ဒီမိုကရေစီ
18-11-2013 (3:00 am)
BY YeYint Nge ... 11/17/2013 1 comment
ဦးသန်းရွှေမှ ဖိအားပေးလာလျှင် ရာထူးမှ နှုတ်ထွက်ပေးရန် အသင့်ရှိကြောင်း ကာချုပ်မင်းအောင်လှိုင်မှ ပြောကြား
လက်ပံခါးလှပွဲကို ခွင့်ပြုလိုက်ခြင်း နှင့်ပတ်သတ်၍ မိမိအပေါ် ဦးသန်းရွှေမှ ဖိအားပေးလာလျှင် လက်ရှိရာထူးမှ နှုတ်ထွက်ပေးရန် အသင့်ရှိကြောင်း ကာချုပ်မင်းအောင်လှိုင်မှ ပြောကြား
အစပိုင်းတွင် လက်ပံခါးလှပွဲ မဖြစ်မြောက်စေရန် နှင့် နည်းလမ်းမျိုးစုံသုံး၍တားမြစ်ရန် ဦးသန်းရွှေမှ အမိန့်ပေးခဲ့ကြောင်း သိရသည် ၊
နောက်ပိုင်းတွင် ဦးသန်းရွှေ၏ အမိန့်ကို ဆန့်ကျင်ကာ ကာချုပ်မင်းအောင်လှိုင်မှ တာဝန်ခံ၍ လက်ပံခါးလှပွဲကို မူလအစီအစဉ်အတိုင်းဆက်လက်ဆောင်ရွက်ရန် ခွင့်ပြုခဲ့ကြောင်း သိရသည် ၊
ဦးသန်းရွှေ နှင့် ဒေါ်ကြိုင်ကြိုင်တို့မှ လက်ပံခါးလှပွဲ ဆက်လက်စီစဉ်နေသည်ဟု သိရသည့် အတွက် ဒေါသထွက်ပြီး ကာချုပ်အားဆင့်ခေါ်နေသည် ဟု သိရသည် ၊
ကာချုပ်မင်းအောင်လှိုင်က သူ့လုပ်ပိုင်ခွင့်ကို အသုံးပြု၍ လက်ပံခါးလှပွဲ လုံခြုံရေးကို ဂရုစိုက်ကြရန် ညွှန်ကြားထားကြောင်း နှင့် ဦးသန်းရွှေ ဒေါ်ကြိုင်ကြိုင်တို့နှင့် တနင်္လာနေ့ ည ပိုင်းတွင် တွေ့ဆုံမည်ဟု အကြောင်းပြန်ထားကြောင်း သိရသည် ၊
လက်ပံခါးလှပွဲကို ခွင့်ပြုလိုက်ခြင်း နှင့်ပတ်သတ်၍ မိမိအပေါ် ဦးသန်းရွှေမှ ဖိအားပေးလာလျှင် လက်ရှိရာထူးမှ နှုတ်ထွက်ပေးရန် အသင့်ရှိကြောင်း ကာချုပ်မင်းအောင်လှိုင်မှ ပြောကြားခဲ့သည်ဟု နေပြည်တော် စစ်ရုံး သတင်းရပ်ဝန်းမှ ပေးပို့လာသော သတင်းဖြစ်သည် ၊
စနေနေ့မှာ မင်္ဂလာဆောင်တဲ့ မေမြတ်မွန်
ဒီအတွက် ဖမ်းမယ်ဆိုရင် ကျမမှာတာဝန် ရှိတဲ့အတွက် ဒီပွဲပြီးတာနဲ့ ကျမအဖမ်းခံပါ့မယ်
ပွဲကိုတော့ နေရာလုံးဝမ ပြောင်းတော့ပါဘူးလို့ သက်ဆိုင် ရာကိုပြောလိုက်ပါတယ်။
အန်ကယ်ဦးဝင်းထိန်က သူ့ ကိုဖမ်းရင် ကျနော့်ကိုလည်း ဖမ်းပါလို့ လိုက်ပြောပါတယ်။
လူဦးရေ နှစ်သောင်းလောက် တက်ရောက်ဖို့ဖိတ်ကြားထားပြီးလည်းဖြစ်ပါတယ်
ဒီပွဲဟာ အထက်မြန်မာပြည်ကို ကိုယ်စားပြုပြီးလုပ်တဲ့ ပွဲလည်းဖြစ်ပါတယ်
ဇမ္ဗူသီရိမြို့ နယ်မှာလုပ်တဲ့ ပွဲလည်းဖြစ်ပါတယ်ဥပ ဒေ ဘောင် အတွင်းကလည်းလုပ်ဆောင်
နောက်ဆုံးမှာတော့ ရဲမှုးကြီးက ဥပ ဒေ ဘောင်အတွင်းက ကူညီပေးလိုက်ပါတယ်။
ဘယ်သူမှ အတင်းအကျပ်မတိုက်တွန်းရပဲ နေပူတော်ကို ပြည်သူတွေ အင်တိုက်အားတိုက် ချီတက်နေကြတာတွေ မြင်ရတော့ ၀မ်းသာပီတိဖြစ်မိတယ်။
တစ်အိမ်တစ်ယောက် မလာမနေရ၊ ၀န်ထမ်းမှန်သမျှ အကုန်တက်စနစ်တွေလောက်နဲ့ပဲ လူစုတတ်၊ အမည်ခံလူထုဆန္ဒပြပွဲလုပ်တတ်တဲ့ လက်ရှိအစိုးရလူကြီးမင်းများ (အရင်နအဖခေါင်းဆောင်ဟောင်းတွေ) ကတော့ ရှက်တတ်ရင် ရှက်နိုင်ကြတာပေါ့ဗျာ။
ကျောက်ဆည်မြို့နယ် အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်မှ နေပြည်တော်
၂၀၀၈ အခြေခံဥပဒေ ပြင်ဆင်ရေးသို့ ချီတက်ရန် စတင်လူစု ပြင်ဆင်နေပါပြီ ။
ဓါတ်ပုံ - ဦးမြသိန်း
ရန်ကုန်ကနေ ကိုယ့်အစီအစဉ် ကိုယ့်အဖွဲ့နှင့်ကို သွားရောက်လိုသူများ .....
အောင်မင်္ဂလာ အဝေးပြေးဂိတ်ကနေ နာရီဝက် တစ်ခါ နေပြည်တော်သို့ ကားထွက်ပါတယ် ။ ည ၁၀ နာရီအထိ ကားများ ရှိပါတယ် ။
ည ၁၀ နာရီ နောက်ပိုင်းမှာလည်း အထူးကားများ ရှိပါတယ် ။
နေပြည်တော်ရောက်ရင် ကားဂိတ်မှာ မနက်စာစား ၊ ရေဘူးဝယ်ပြီးရင် ဟောပြောမယ့်နေရာကို ဆိုင်ကယ်ကယ်ရီများဖြင့် ဆက်လက်ခရီးဆက်နိုင်ပါတယ် ။
နေပြည်တော်နယ်မြေ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ ရှင်းလင်းဟောပြောပွဲကို ရန်ကုန် မန္တလေးနှင့် အနီးအနား မြို့များမှ ပြည်သူတွေ ဘာကြောင့် သွားရောက် ထောက်ခံဝိုင်းဝန်းရသလဲဆိုတော့ .... နေပြည်တော် ၄ မြို့နယ်မှာ မှီတင်းနေထိုင်ရတဲ့ သိန်းပေါင်းများစွာသော နင်းပြားဝန်ထမ်းများမှာ တင်္နလာနေ့ မနက် ၉ နာရီအရောက် ရုံးတော်များသို့ တက်ရောက်ရမှာ ဖြစ်လို့ ဖြစ်ပါတယ် ။
အဲသည်အတွက် ကျနော်တို့က သူတို့ကိုယ်စား အစားထိုး တက်ရောက်ပေးရမှာ ဖြစ်ပါတယ် ။ မနက်ဖြန် ရုံးနောက်ကျရင်ဖြင့် ရာထူးကျမယ် ၊ နယ်ရောက် ချောင်ရောက်မယ် ၊ အလုပ်ပိုခိုင်းခံရမယ်
ကျနော်တို့ ရန်ကုန်က အဖွဲ့တွေကတော့ ည ၁ နာရီ ၂ နာရီမှပဲ ထွက်ကြမှာပါ ။ နေပြည်တော်ကို ရောက်ဖို့ ၅ နာရီပဲ ကြာမှာပဲ ။ နေပြည်တော်မှာ မနက်စောစာ စားပြီးတာနဲ့ ကွင်းထဲကို ရောက်နေကြမှာပါ
ရန်ကုန် ၊ ပဲခူး ၊ တောင်ငူ ၊ ရေတာရှည် ၊ ရမည်းသင်း ၊ သာစည် ၊ မိထ္ထီလာ မှ ပြည်သူများလည်း နေပြည်တော် NLD ခြေဥ ဟောပြောပွဲကို တက်ရောက်ကြမှာ ဖြစ်ပါတယ် ။ လိုက်ပါလိုသူများ နီးစပ်ရာ NLD ရုံးများသို့ ဆက်သွယ်လိုက်ပါနိုင်ပါတယ် ။
* မင်္ဂလာရှိသော နံနက်ခင်းပါ *
* ရွှေမန်းသူ ရွှေမန်းသားအပေါင်းတို့ မနက်ဖြန် (၁၈) ရက်နေ့
နေပြည်တော်မှာ ကျင်းပပြုလုပ်မည့် အခြေခံဥပဒေ ပြင်ဆင်
ရေး ဟောပြောပွဲ နှင့် လူထု ဆန္ဒခံ ယူပွဲအား တက်ရောက်
ရန်လေးစားစွာ တိုက်တွန်းနှိုးဆော် အပ်ပါသည်။*
* ပြည်သူများ အားလုံး မိမိကို အုပ်ချု ပ်တဲ့ဥပဒေ ။
မိမိ လိုချင်တဲ့ ဥပဒေ ။
အာဏရှင် အတွက် တစ်ဖက်သတ်ရေးဆွဲထားတဲ့ ဥပဒေ
စသည်တို့ကို စစ်မှန်သော ဒီမိုကရေစီနည်းလမ်းတကျ
ဖြစ်စေရန် ပြည်သူ တစ်ဦးချင်း မိမိကိုယ်တိုင်ပါဝင်ဆင်နွှဲ
၍ တောင်းဆိုမှရပါမည် ။*
* ပြည်သူများအားလုံးဒီအခွင့်အရေးကို လက်လွတ်မခံပါနှင့်*
ရပ်ဝေးရပ်နီးမှ တက်ရောက်လိုသူများ ၊ သတင်းရယူလိုသူများ အတွက် ....
နေပြည်တော် ဖွဲ့စည်းပုံဆိုင်ရာ လူထုဆန္ဒသဘောထားရယူရေး လူထုဟောပြောပွဲကြီး ကျင်းပရေးဦးစီးကော်မတီ
အိုအိုင်စီအဖွဲ့အား အချိန် ၁၀ နာရီကျော် ကြာအောင် စောင့်ဆိုင်းခဲ့ပြီး ကန့်ကွက် ဆန္ဒပြ
နိုဝင်ဘာ ၁၆ ရက် နံနက် ၇ နာရီအချိန်ခန့်မှ ညနေ ၅ နာရီဝန်းကျင် အချိန်အထိ လူဦးရေ ၃၀ ခန့် သည် အိုအိုင်စီအဖွဲ့အား အချိန် ၁၀ နာရီကျော် ကြာအောင် ရန်ကုန်လေဆိပ်တွင် စောင့်ဆိုင်းခဲ့ပြီး ကန့်ကွက် ဆန္ဒပြခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
မနက်ဖြန် နေပြည်တော် ဟောပြောပွဲမှာ ကြွေးကြော်ရမှာ .... ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲကို ၃ လအတွင်း ကျင်းပပေးဖို့ လည်းပါပါတယ် ။ သူတို့ ကောင်တွေကျတော့ ၀င်လိုက်ထွက်လိုက် လွတ်တော်တကြိမ်ဖွင့်တိုင်းပိတ်တိုင်း လုပ်နေကြပါတယ် ။
ပြည်သူ့လွှတ်တော်မှာ လစ်လပ်နေတဲ့ နေရာများစွာအတွက်ကို ကြားဖြတ်မလုပ်ပဲ ရှုးချင်ယောင်ဆောင်နေကြပါတယ် ။ ပြည်သူအကျိုးကို အမှန်တကယ် အနာခံပြီးလုပ်မယ့် ကိုယ်စားပြုမယ့်အမတ်တွေကို ထပ်ပြီး လွှတ်တော်ထဲကို မ၀င်လာစေချင်တဲ့ သဘောပါ ။
ပြီးခဲ့တဲ့ ၄ ပါတ်အတွင်းမှာပဲ ပြည်သူ့လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် ၃ ဦး ဆုံးပါးသွားပါတယ် ။ လစ်လပ်နေရာတွေကို ပြည်သူ့ပါတီတွေ ၊ တိုင်းရင်းသားပါတီတွေ ၊ တစ်သီးပုဂ္ဂလတွေအတွက် အမြန်ဆုံး လမ်းဖွင့်ပေးရပါမယ် ။
၂၀၀၄ ၊ ၂၀၀၅ .... ၂ နှစ်လုံးကြီး ထိုင်မစောင့်နိုင်ပါဘူး ။ ၂၄ နှစ်လုံးလုံးလဲ နောက်ကျေနေခဲ့ပါပြီ ။ လုပ်စရာရှိတာတွေ အမြန်လုပ် ၊ ပြင်စရာရှိတာတွေ အမြန်ပြင်ဖို့ ပြည်သူ့ကိုယ်စားပြုအမတ်တွေ လစ်လပ်နေရာတွေကို အမြန်ဝင်လာနိုင်အောင် ကြိုးစားရပါမယ် ။
နောက်တစ်ယောက် (သခင်လေးသောင်) အသက်(၉၄)နှစ်။
ကျွန်ုပ်တို့တိုင်းပြည် ရဲ့ သခင်တွေအသက်က ၉၀ ကျော် လမ်းမ ပေါ်မှာ ပိုက်ဆံတောင်းစားနေရကြရှာတယ်ပြောတော့ စစ်မှု့ထမ်းဟောင်းတွေ အတွက် ဘယ်လောက် ရာခိုင် နှုန်းအစိုးရက ထောက်ပံ့ပေးနေတယ်ဆို တာပြောနေကြသလဲ အသက်တွေ မ သေလို့ ကျန်ခဲ့တဲ့သခင် တွေကျတော့ လက် ရှိဗိုလ်ချူပ်တွေ အိမ်က အိမ်ဖော် တစ်ယောက်လောက်တောင် ခံစားခွင့် မရှိကြဘူး အိမ်ဖော်နှင့်သခင် ခိုင်းနှိုင်းခြင်းမဟုတ်ပါအိမ်စောင့် အစိုးရ တက်လာချိန်မှာ အစ ပထမ တော့ အနည်းအကျဉ်းထောက်ပံ့တယ်နောက်တော့ လိုက်လံဖမ်းဆီးတယ် သခင် လေးသောင်ဆို တောခိုသွားရရှာတယ်။ မထင် မရှား ဇာတ်မြှပ် နေခဲ့ကြတာသူတို့ မိသားစု စားဝတ် နေ ရေးအတွက် ဘယ်သူကို မှ အပူမကပ်ပဲအသက် ၉၄ နှစ် တန်ပေမယ့်လမ်းမ ပေါ်ပိုက်ဆံ ထွက်တောင်းနေရရှာတယ်။ အခုလို ပဲခူးက သခင် လှကြိုင်အ ကြောင်း ကြားသိလိုက် ရလို့ သခင် တွေ ကို သခင် လိုပဲ မြင် ချင်တဲ့ ကျွန်တော် ဆန္ဒ တစ်ခု ပြည့်ဝ လို့ အရမ်းဝမ်းသာရပါတယ်ဗျာ ကျွန်တော်ကြိုးစားပေးနေတာတစ်နှစ်ကျော်ခဲ့ပါပြီအဘ သခင် လေးသောင် ကိုလည်း သခင် လို့ အသိမှတ်ပြုပေးကြပါအုံးလို မေတ္တာ ရပ် ခံ တင် ပြရင်းဓာတ်ပုံ များကို တင်ပြ လိုက် ရပါတယ်။
သတင်းဓါတ်ပုံ- Minmin Nld.
သ ခင်လေးသောင် ဆိုသူမှာ အ မေစု ငယ်စဉ် အခါက ထိန်းခဲ့ဖူးပါတယ်
ဗိုလ်ချူပ် အ ကြောင်းပြန်ပြောပြလျှင် လွန်စွာမှ နားထောင် ကောင်းပါသည်
သူပြောပြသည့် အထဲမှ နမူနာ တစ်ခု ရေးပြပါမည်
တစ်နေ သော် ဒေါ်ခင်ကြည် နှင့် ညီမ ဖြစ်သူတို့ ဈေးမှပြန်၍ အိမ်တို့ အလာ ရဲဘော် တစ်ဦးမှ ညီမ ဖြစ်သူအား လူပျိုစကားပြောလိုက်မိပါသည်
ထိုအ ကြောင်းကို အစ်မဖြစ်သူအား ပြန်တိုင် လိုက်သောအခါ အစ်မဖြစ်သူမှ ဗိုလ်ချူပ်အိမ်သို့ ပြန်ရောက်ရောက်ချင်းပြန်လည် ပြောပြပါတော့သည်
ထိုစဉ် ဗိုလ်ချူပ်မှ ထိုင် ရာမှ ချက်ချင်း ထ၍ မင်္ဂလာဒုံမြို့နယ် ရှိတပ်သို့ကားဖြင့် ထွက်ခွာလာခဲ့သည်
တပ်သို့ ရောက်သည် ဆိုလျှင် တပ်ဖွဲ့ဝင် များအားလုံးကို စုရုံးစေပြီ အသံပြတ်ပြတ်ဖြင့် မေးပါတော့သည်
ဒီက နေ့ငါခယ်မကို ရည်းစာ စကား ပြောတာဘယ်သူလဲ ထွက်ခဲ့လို့ပြောနေသည့် အချိန်
" နောက်ဆုံးမှ ရဲဘော်တစ်ဦး ဗိုလ်ချူပ်ရှေ့ သို့ ထွက် လာကာ ကျွန်တော်ပါပဲ ကျွန်တော်မှာ အပြစ် ရှိပါတယ်။
ပေးတဲ့ အပြစ်ကို ခံပါမယ် ဆိုပြီး သတိအ နေထားဖြင့် ရပ်နေပါတယ် "
ဗိုလ်ချူပ်မှ ထိုရဲဘော်အနီးသို့လျှောက်သွားကာ ရဲဘော်၏ ပုခုံးပေါ်သို့လက်ကိုတင် လိုက်ပြီး ဗိုလ်ချူပ်ပြောလိုက်ပုံက
" ဒါမှ ငါရဲဘော် ငါသ ဘောတူတယ် " လို့ ဖြေလိုက်သည်ဆိုရင် ပဲ ဘေးမှာရှိနေကြတဲ့ ရဲဘော်အားလုံးဟာ ဟာခနဲဖြစ်သွား ကြပါတော့သည်
ပြောပြလျှင် ကုန်မှာ မဟုတ်သည့် အတွက် သခင် လေးသောင် နှင့်တွေ့ ကြသည့်အခါ သိချင် သမျှ မေးတာ ကြည့်ကြပါတော့ ခင် ဗျာ
ဂျပန်စကားကို ကျွမ်းကျွမ်းကျင် ကျင် ပြောဆိုပုံကို အံ့အားသင့်မိပါသည်
အသက် ၉၄ နှစ် ရှိပြီ ဖြစ်သော်လည်း မေ့လောက်ပြီ ထင် မှ ပြန်မေးလဲ ဒီစကားအတိုင်း ခုနှစ် သက္ကရာဇ် တွေမှ အစ အတိအကျ ပြောနိုင် ပါသေးသည်
Min Min NLD : https://www.facebook.com/minmin.nld မှ ကူးယူဖော်ပြသည်
OIC အဖွဲ့ စစ်တွေလေဆိပ်မှ ရန်ကုန်သို့ မထွက်ခွာမီအစည...
နေပြည်တော်သို့ ချီတက်လာသော စစ်မှန်သည့်ဒီမိုကရေစီလိ...
ဦးသန်းရွှေမှ ဖိအားပေးလာလျှင် ရာထူးမှ နှုတ်ထွက်ပေးရန...
အိုအိုင်စီအဖွဲ့အား အချိန် ၁၀ နာရီကျော် ကြာအောင်ေ...